Mpanamboatra Hose Rivotra / Rano - Mpanonta & Ozinina Hose Air / Rano any Sina
Tady an-damba maromaro MW300 (Vavony voafono)
Hose fingotra vita amin'ny multipurpose dia hose nentim-paharazana ampiasaina amin'ny indostria maro.Ny fingotra dia hijanona ho malefaka kokoa rehefa mandeha ny fotoana raha oharina amin'ny hoses PVC, indrindra amin'ny tontolo mangatsiaka kokoa.Izy io dia azo ampiasaina amin'ny rivotra, rano, heater, na famafazana fambolena amin'ny tsindry ambany izay voafetra ny fisian'ny menaka.
Tady lamba multipurpose hose MS300（Smooth surface）
LPG Gas Hose LG300
LPG Hoses atolotra dia azonay atao amin'ny famaritana farany araka ny fenitry ny indostria isan-karazany toa ny EN, IO, GB ary ny hafa ary hita fa ampiasaina amin'ny fifandraisana fandrahoan-tsakafo ara-barotra sy trano fonenana.Mahita fampiasa amin'ny fitaterana LPG, ireo hoses ireo dia tonga miaraka amin'ny fonony anatiny tsara kokoa.
Tady lamban-drivotra hose AW300 (Vorona fonosina)
Hoses rano fingotra, Hose fanaterana rano, Tubing rano fingotra, Hose rano nohamafisina, Hose fanaterana an'habakabaka, Hose fingotra, Hoses rivotra azo havaozina, Tubing rivotra manamafy, tsipika fantsona fingotra avo lenta. Ho an'ny tanjona ankapobeny amin'ny indostria, fanorenana tranokala sy toeram-pitrandrahana.
Tady lamban-drivotra hose AS300 (Smooth surface)
Fanodinan-tsolika vita amin'ny fingotra, Fantsona menaka flexible Reinforced, fantsona solika nohamafisina.solika sodina tsipika, menaka fanaterana fingotra hose, menaka fanoherana fingotra hose, menaka fanoherana fingotra hose amin'ny Fibre reinforced.Suitably amin'ny fitaterana ny lasantsy, solitany, gazoala, motera menaka, menaka fanosotra.
Tady lamban-tsolika hose FS300 (Smooth surface)
Hose fanaterana rano WD150
Hose fanaterana menaka OD150